Waxaa jira siyaabo kala duwan in ay dib u kor playlists, barnaamijyadooda, fariimaha, xiriirada ka iPhone maktabadda Lugood iyo waxaa ka mid ah lagu xafido. Marka aad furaysto in aad iPhone si aad u computer iyo abuurtaan Lugood, waxaad isla markiiba ka arki kartaa fursadaha in ay gurmad xogta si aad u your computer ama in iCloud.
Si kastaba ha ahaatee, marka aad isku daydo in ay gurmad aad iPhone in Lugood iyo iCloud, waxaad arki kartaa farriin digniin ah in aad iPhone ma laga yaabaa in la xoojiyaa ay sabab u tahay mid ka mid ah sababahan:
Qaybta 1. iPhone gurmad via Lugood dhib Qaybta 2. iPhone gurmad via dhib iCloud
Qaybta 1. iPhone gurmad via dhib Lugood
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhibaatooyinka laga yaabaa in aad la kulantid marka aad gurmad iPhone in Lugood,
• fadhiga gurmad ayaa ku guuldareysatay
• Fadhiga aan la bilaabay
• iPhone ayaa diiday codsiga
• Qalad dhacay
• qalad aan la garaneynin ayaa dhacay
• gurmad ayaa laga yaabaa in aan la badbaadin ee computer this
• Ma meel ku filan oo lacag la'aan ah waxaa laga heli karaa
Haddii aad aragto mid ka mid ah fariimaha ama fariin ka duwan, ama haddii Lugood for Windows istaago ka jawaabidda ama gurmad marnaba dhameeyo, raac tallaabooyinka hoose.
1). Password ayaa in lagu furo aad iPhone file gurmad:
Waxaad samayn kartaa in ay dib u soo celinta aad iPhone sida telefoonka cusub. Si dabiici ah in aad waayi doonto dhammaan content, laakiin waxa aad u soo celin kartaa inta badan waxaa ka mid ah haddii aad mar uun gurmad aad iPhone. Haddii ay suurtowdo in la sameeyo gurmad ah baraha kale ka dib markii aad abuuray mid ka mid ah lo, qof kasta oo stoles aad iPhone si fudud ayaa laga yaabaa gurmad ah baraha kale ee aad habayn qufulan iPhone iyo u arkaan dhammaan xogta aad.
2). Hubi goobaha aad ammaanka
Waxaad u baahan kartaa inaad cusboonaysiiso, reserved, gab, ama uninstall software ammaanka.
3). Kaabta ama soo celin adigoo isticmaalaya xisaab maamulka cusub:
Sameysato akoon cusub maamulka on your computer iyo u isticmaalaan si ay u sameeyaan gurmad ah. Raac tallaabooyinkan u Mac OS X ama talaabooyinkan on website Microsoft ee Windows. Haddii aad dib kartaa adiga oo isticmaalaya xisaab maamulka cusub, gasho adiga oo isticmaalaya xisaab ay user asalka iyo raac tallaabooyinkan:
Tallaabada 1. Hubi account waa maamulaha.
Tallaabada 2. Hubi rukhsadda ee tusaha meesha Lugood qoray gurmad ah.
Tallaabada 3. Magaca folder hayaan ah.
Tallaabada 4. Open Lugood oo isku day mar kale in ay dib u up. Copy aad gurmad hor inta aadan isticmaalin Lugood rabtid > Qalabka in ay tirtirto aad gurmad.
4). Dib u celi folder cakiran ee:
Haddii aadan u hagaagsan karo, gurmad, ama soo celin aad iPhone, waxaa laga yaabaa in aad la baray inay dib folder cakiran ee aad Mac ama Windows.
Tallaabada 1. Laga soo bilaabo Finder ah, doortaan Go > Tag folder .
Tallaabada 2. Nooca / var / dB / cakiran iyo saxaafadda noqo.
Tallaabada 3. Dooro View > sida Leyliga . Suuqa kala Finder waa in ay muujiyaan hal ama in ka badan files leh magacyo alphanumeric file.
Tallaabada 4. In Finder ah, doortaan Edit > Dooro oo dhan .
Tallaabada 5. Dooro File > dhaqaaq Trash . Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad ku qortaa erayga sirta maamulka.
Fiiro gaar ah: Delete files ee folder cakiran ah, ma tirtirto folder cakiran ee.
Tallaabada 1. Riix weyneyso ah.
Tallaabada 2. Nooca ProgramData iyo saxaafadda noqo .
Tallaabada 3. Laba-guji folder Apple ah.
Tallaabada 4. Xaq-riix folder cakiran iyo dooro Delete.
Tallaabada 1. Dooro Start , nooca ProgramData in bar raadinta, iyo saxaafadda noqo .
Tallaabada 2. Laba-guji ee Apple folder.
Tallaabada 3. Xaq-riix folder cakiran iyo dooro Delete.
Tallaabada 1. Dooro bilow > Run .
Tallaabada 2. Nooca ProgramData oo guji ru n.
Tallaabada 3. Laba-guji ee Apple folder.
5). Lugood aan dib karin ilaa ay iPhone "iPhone Magaca" sababtoo ah gurmad wuu kharribnaa ama aan la socon iPhone:
Tani waa in xal loo helo (7) Windows, oo ma khuseeyo OP ah, laakiin waxay u muuqataa inuu dhibaato in la xalliyo horay heerka kasta.
Tallaabada 2. Hubi in Explorer bandhigayaa files maqan.
Tallaabada 3. Tag C: \_ Users \_ username \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Kombiyuutaro \_ MobileSync \_ gurmad
Tallaabada 4. Delete wax walba (ama meel kale u guuraan, in ay dhinaca ammaan ah)
Tallaabada 5. Oo waxaan sameeyey. In aan kiiska, waxaan tirtiray laba fayl la dheer, shaki, magacyada alphanumeric, mid madhan, oo kale oo ay ka gaareen 1GB ee size. Markii aan mar kale furay Lugood, waxaan abuuri kari lahaa brand gurmad ah oo cusub oo aan khaladaad kasta.
6). Lugood aan dib laga yaabo iPhone sababtoo ah gurmad ah la badbaadin waayay.
Tallaabada 1. Dul C: \_ Users \_ isgarad-\_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync.
Tallaabada 2. Xuquuqda riix kaabta folder dooro Guryaha .
Tallaabada 3. Dooro Security tab
Tallaabada 4. Riix badhanka edit iyo muujiyo Qof kasta .
Tallaabada 5. Hubi gacanta Full checkbox oo ka dhacay Codso ka dibna OK .
Tallaabada 6. Riix OK mar kale
Qaybta 2. iPhone gurmad si dhib iCloud
Ma doonaysaa in aad gurmad iPhone via iCloud? In ay qayb ka socda, waxaan ku qor soo baxay qaar ka mid ah dhib. Haddii ay dhacdo in aad qabto dhibaato la mid ah, rajaynaynaa in ay kaa caawin karaan.
1). Waa maxay sababta iCloud ilaa aan taageero DHAMAAN xiriirada aan?
iCloud u muuqata in ay ganaax ka shaqeeya, marka laga reebo in aanay ilaa taageero dhammaan xiriirada aan, qayb taxane ah.
Haddii isbedel dhowaan ku Xiriirada aad iPhone ma muuqdaan aaladaha kale ee aad, iyo aad syncing xiriir la leh cinwaano dhowr ah oo aad iPhone (iCloud, Gmail, Yahoo), hubi in iCloud waa account default aad u Xidhiidhada:
Tubada Settings > Mail, Xiriirada iyo Kalandarada . In qaybta Xiriirada, tuubada Account Default , ka dibna tubbada iCloud .
Haddii aad isticmaalayso macruufka 7, ka tago iyo guuleysatey xidhiidho app aad iPhone:
Tallaabada 1. Riix badhanka Home laba jeer si ay u arkaan screens Kulanka Xiisaha Leh oo ka mid ah barnaamijyadooda aad leedahay furan.
Tallaabada 2. Raadi screen Xiriirada Xiisaha Leh oo mari ilaa iyo Falanqeynta inuu ka tago codsiga.
Tallaabada 3. Tubada button Home inuu ku soo laabto shaashada Home.
Tallaabada 4. Sug hal daqiiqo ka hor inta uusan dib ugu app Xiriirada.
ICloud Xiriirada Dami iyo dib:
Tallaabada 5. Tubada Settings > iCloud .
Tallaabada 6. Xiriirada off. Dooro in ay tirtirto xogta keliya haddii xogta aad ka jirto icloud.com/contacts iyo mid ama ka badan qalabka aad. Haddii kale, waxay dooran Hayso Data .
Tallaabada 7. Dhowr daqiiqadood sug ka hor jeestay Xiriirada dib.
Tallaabada 8. guuleysatey aad iPhone by haysta hoos hurdada / button Wake ka dibna kabacdi shaashadda marka dhalisay in tamarta off. Markaas jeedi iPhone dib. Tani waxay u muuqan kartaa mid fudud, laakiin waxa aanu reinitialize aad network iyo codsiga goobaha iyo si joogto ah u xalin karaan arrimaha.
2). fariin kaabta iCloud ma tegi doonto & sidhab ah shaashadda
Qabo hurdada ka (On / Off) & button Home hoos (wada) ee ku saabsan 10-12 ilbiriqsi.
Ku hay hoos LABADA badhamada kor ku xusan ilaa aad ka aragto Apple Logo (xirey kadibna), (aad u muhiim ah)
Marka Logo u muuqata in go of badhannada ha. Sug 1-2 daqiiqo ee software iyo daaha guriga si cabbayso.
3). Waxaan leeyahay iPhone cusub oo ku socday inuu dowladnimadiisii ​​ka iCloud laakiin waxa ay sheegtay in ay jiraan gurmad ma laga heli karaa anigu login:
Haddii aad isticmaalayso iCloud, waxa ay si toos ah dib kartaa xogta aad ilaa iyo inta aad dooratay Doorashadan. Waxaad xaqiijin kartaa gurmad iCloud iyo in la hubiyo in ay ilaa taariikhda raacaya tallaabooyinka soo socda:
Tallaabada 1. Tubada Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta .
Tallaabada 2. noqda ee kaabta iCloud haddii ay off.
Tallaabada 3. Tubada Back Up Hadda . Haddii aad qabto iPhone cusub, ama haddii aad u baahan tahay in la soo celiyo aad iPhone si loo xaliyo arrin, raac tallaabooyinkan.
Tallaabada 4. Raac tallaabooyinka hore ee Kaaliyaha Setup macruufka ah (xulo afkaaga, iyo wixii la mid ah).
Tallaabada 5. Dooro Soo Celinta ka kaabta iCloud markii kaaliyaha aad weydiiyo si aad u iPhone (ama qalab kale oo macruufka).
Tallaabada 6. Dooro gurmad aad u abuuray ka hor. Waxaad soo celin karaa gurmad ah oo kaliya iyadoo la isticmaalayo Kaaliyaha Setup macruufka.
Haddii aad hore u dhigay aad iPhone, aad marna masixi karin oo dhan content hadda in ay mar kale maraan Kaaliyaha Setup macruufka. Tubada Settings > General > celi > masixi All Content iyo Settings . Waxan samee oo kaliya haddii aad horey u gurmad ah, tallaabadani waxay ka saari doonaan oo dhan content hadda ka iPhone.
4). Sidee baan ku soo celin gurmad ka iCloud haddii aan iPhone hore u sameysan yahay ayaa loogu isticmaalo?
Tallaabada 1. Waxaad u baahan doontaa in masixi dhammaan macluumaadka iyo goobaha ka iPhone. Marka hore, hubi in aad leedahay raad raac iCloud ah si loo soo celiyo:
Tallaabada 2. Tag Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta > Maamul Kaydinta . Markaas ka jaftaa magaca iPhone si aad u eegto liiska iCloud files dib.
Tallaabada 3. Hubi taariikhda gurmad aad rabto in la soo celiyo, maxaa yeelay, idinku soo celin karaa oo keliya iPhone ka waxa iCloud ayaa xoojiyaa on taariikhdaas.
Tallaabada 4. Ka dib marka aad xaqiijiyo in gurmad iCloud ah waxaa laga heli karaa, xiriiriyaan iPhone in il awoodeed ah iyo in la hubiyo in uu ku xiran internetka via Wi-Fi.
Tallaabada 5. Raac tilmaamaha u soo celinta qalabka macruufka ka gurmad iCloud ah, taas oo ka mid ah in la hubiyo in aad iPhone waxaa la isticmaalayo nooca ugu dambeeya ee macruufka.
5). Sidee ayaan cadeyn karo habka soo celiyo ee iCloud socda?
Tag Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta . Markii geeddi-celin socda, goob iCloud ee kaabta wuxuu yeeley Dabool waxaana waxaad fursad u haysataa in ay ka jaftaa Stop celinta.
Talooyin iyo tabaha on iPhone Update
Update iPhone leh oo aan iPhone
Ka kaabta iCloud / Lugood Soo Celinta iPhone
The Best Transfer iPhone Tool Waxaad u
Ka iPhone Delete Wax walba
> Resource > iPhone > 11 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay iPhone kaabta la Lugood / iCloud